Ngaphezu kwamagquma futhi kude ngokwanele - I-Airbnb
Ngaphezu kwamagquma futhi kude ngokwanele
U-Virginia Ungumbungazi ovelele
Ngemuva kocingo lwendabuko lwamapulangwe kanye nama-1.5K ase-Kuranda Village, kulele ekhaya lethu lesitayela sase-Queenslander. Ngaphesheya kobude bonke bengemuva lendlu kuhamba umpheme, nokubukeka ngaphesheya kwengadi kanye nesigodi esiya eSaddle Mountain. Lapha, uma unenhlanhla, ungabona i-Riflebird yase-Victoria idlala umdanso wenkantolo, ubone futhi uzwe i-elusive Catbird, ama-honeyeaters, amahobe, ama-kookaburras nama-kites ahamba ngebhizinisi lawo njenge-Cairns birdwing enkulu ne-Ulysses butterflies waft edlule emoyeni.
Izungezwe izingadi zasenkabazwe kanye nehlathi lemvula, indawo yakho yokuhlala inendawo yayo yokungena ehlukile futhi ihlanganisa umbhede omkhulu nendawo yokuhlala eseduze. Inompheme wayo ngaphansi kwesembozo somvini othandwayo wezinyoni, indawo ekahle yokubuyela emuva futhi uphumule ngencwadi enhle noma i-G&T. Ukupaka kungaphandle komgwaqo futhi kuseduze nendawo yakho yokungena futhi kukhona i-wifi enejubane eliphakeme etholakalayo kuyo yonke indawo. Kukhona i-lawnmower kanye nebhulashi lokusika noma ubani onentshisekelo yokutshala amanye amakhilomitha angu-7.6 asemgqeni azungeze indlu, hey!
Sihlala endaweni yasemaphandleni, lapho abantu behlala khona kakhulu. Indawo eseduze iyingxube yamapulazi avulekile kanye nehlathi lemvula lasekuqaleni. Kunamabhishi anezinzwa eceleni kwe-Barron River okubhukuda. Ukuhamba uye e-Kuranda kuthatha imizuzu engu-20 indlela ngayinye. Azikho izitolo eziseduze - i-Kuranda isondelene kakhulu. Noma kunjalo, kunesikhungo esikhulu sokuthenga (i-Smithfield) esine-Coles, i-Woolworths, i-Dan Murphys ne-Bunnings ngemizuzu engu-15 yokushayela phansi entabeni.
Kukuwe. Sobabili singongoti abahamba kahle abajabulela ukuhlangana nabantu abasha futhi abaqonda imingcele. I-Virginia ingumsebenzi wohambo ochwepheshile, ngakho-ke uma ufuna iseluleko ngalokho ongakubona noma ukwenze, udinga usizo ngokubhukha noma ufuna ukujabulela uhambo olwenzelwe umuntu siqu naye, vele umbuze. Ukhuluma isi-Catalan, iSpanishi, isiNtaliyane futhi, isiNgisi. U-Stephen usebenza ekukhangiseni futhi uchitha isikhathi esiningi e-Papua New Guinea. Ngokubambisana babuyela edolobheni lasekhaya lase-Virginia lase-Barcelona kaningi ngangokunokwenzeka, nokuvame ukunganele u-Stephen. Babelana ngendawo nenja encane - Tupitu - ongakaze abe negalelo ekugcineni indlu, kodwa ngokuvamile zisebenza njengokungathi ungumnikazi wayo.
Kukuwe. Sobabili singongoti abahamba kahle abajabulela ukuhlangana nabantu abasha futhi abaqonda imingcele. I-Virginia ingumsebenzi wohambo ochwepheshile, ngakho-ke uma ufuna iselu…
UVirginia Ungumbungazi ovelele